Ubuhlungu obukhulu ngokuncelisa
Kusukela ezinsukwini zokuqala emva kokuzalwa kweziqu, ngezinye izikhathi kuxhomeke ukuthi ukubeletha kuzophumelela yini. Yini okufanele ngiyenze uma umama egula ngesikhathi sokudla? Umama omusha kufanele aqonde ngokucacile ukuthi kuzokwenzekani ngemva kokubeletha nokuthi yiziphi izinguquko ezenzeka uma eqala ukuncelisa. Inqubo yokudla ezinsukwini zakuqala ingabangela kokubili ukuzwa okuthakazelisayo, futhi akunjalo. Ngifuna ukukutshela ukuthi ungabhekana kanjani nobunzima ngesikhathi uncelisa, uma kwenzeka. Ubuhlungu obukhulu ekunceliseni ingane kuyimbangela yokuhlupheka kwakho, kodwa sizokusiza.
Kukholelwa ukuthi uma izinsikazi zomhlengikazi zilimala ngenkathi ukuncelisa ingane kuyisibonakaliso sokunamathiselwa okungalungile. Ezimweni eziningi lokhu kunjalo. Kodwa-ke, kunabesifazane abanesikhumba esiphezulu, okuyinto ngisho nalapho kusetshenziswe kahle ezinsukwini zokuqala noma emasontweni okudla kungaba buhlungu. Lokhu kubangelwa umthwalo omusha esikhumbeni se-nipple kanye ne-areola, kuthatha isikhathi sokujwayela, uma nje uhlelo lokusebenza lusalungile. Kodwa ake siqale sicacise ukuthi kuyini. Ngesicelo esifanele, umama uthumela ingonyama yakhe futhi ingxenye enkulu ye-areola emlonyeni ovulekile womntwana. I-crumb ithatha isifuba, futhi uma iyakhipha. Ingono yomama ingase ibukeke igxilile, njenge-cylinder ngisho ne-slide. Isikhumba asilimazi, umbala we-ingono awuguquki (uhlala ufana ne-areola). Unganciphisa kanjani ubuhlungu obuye kwavela kuze kwenziwe isicelo esifanele? Khetha ukuma okulungile kokudla. Isibonelo, ukuhlelwa kokuqamba amanga ngokuvamile kuholela ekusetshenzisweni okungalungile, ngoba ukuhamba komama kunqunyelwe. Kuyinto elula kakhulu ukuqeqesha okunamathiselwe okujulile okuphakelayo ukuhlala noma ukuma, ngakho ungasebenzisa kokubili izandla. Uma une-episiotomy emisebenzini (i-perineal incision), khona-ke kuyoba lula futhi akusizi ubuhlungu ukuba uhlale phakathi kwezihlalo ezimbili ezinzima, ukuze isifunda se-perineal sihlale sisisindo phakathi kwabo.
Yondla ingane okwesikhashana, ungavumeli ukuthi umlenze uhlale "u-hang" esifubeni isikhathi eside.Uma usondla ingane njalo amahora angu-1.5-2, kodwa imizuzu engu-5-10, kuyokwenza kube lula kakhulu impilo yakho futhi mhlawumbe ivimbele ukulimala kwezingono. ngokufanele uthathe isifuba somntanakho kusuka emntwaneni: faka umunwe wakho ekhoneni lomlomo wengane (ungacabangi ngokugeza izandla, ngicabanga ukuthi akudingekile), unganqamule izinsini bese ukhulula ingono kanye ne-areola. Umthwalo on the nipples uzoba ngesigamu. Ngokudla, shintsha ukuthi kube ngcono, qhubeka usondla kusuka esiswini esisodwa kuya kwesinye isidlo. Ngesikhathi sesidlo sokudla, zama ukugxila ekuhluphekeni, thola ithuba lokuziphazamisa .Ngokwenza lokhu, yenze incwadi yakho oyintandokazi isondele, ubuke ama-movie, ukhulume efonini nabangani bakho. Uma usuqedile ukondla i-crumb, futhi ingane ifuna futhi ingakwazi ukulala ngaphandle kwebele, kungenzeka ukuthi ugule emapeni. Into ebaluleke kakhulu ukukholelwa ukuthi umntwana uyakwazi ukulala ngaphandle kokuncelisa isifuba sakho. Yebo, okokuqala ingane izokhala. Kodwa ukuzamazama okunamandla, okuhambisana ne-lullaby, kuzomsiza umntwana ahlale ethule futhi alele ebuthongweni. Ngemuva kokuba ingane ilele, impela igcoba izingono zokuphulukisa (Purilan, Bepanten, Solkoseril, njll). Uma uvuvukala noma ugula ngamabhanti, sebenzisa ukucindezela okubandayo ukwelashwa, ungasebenzisa ngisho iqhwa okwesikhashana (imizuzu engu-10-15 izikhathi eziningana ngosuku). Amanzi okugeza ebhokisini azoba usizo.
Ezinsukwini zokuqala, ngenkathi isifuba sikhiqiza, sincane kakhulu, sincane. Futhi ngosuku lwesithathu 3-5, i-colostrum iqala ukuguqula ubisi bokuqala. Umzwelo wokugcwele, ukuqhuma nokudabuka kungabonakala futhi kwandise, isifuba sigcwele futhi siqinile, ukwanda kwevolumu. Abanye omama, besaba yizinguquko ezinjengezinhlanzi ezincelisayo, basebenzisa ukucacisa. Kodwa ngokuvamile kaningi emahoreni okuqala kokufika ubisi, amabele cishe akwazi ukuboniswa. Ungethuki futhi ungabizi umhlengikazi ukukusiza ukuba uhlasele amabele akho. Umsizi uzoqala ukugcoba amabele, ngokuqondile "ukumcindezela", okuzobangela ubuhlungu obuningi kumhlengikazi omanzi.Uma ubonisa ubisi ngobuningi obukhulu, kuzokwenza umzimba womama ukhiqize ubisi obuningi, ngakho-ke inkinga yokugcwalisa amathumbu iba yindabuko. i-lactation - "isidingo sikhiqiza isiphakamiso" - kanti ngesikhathi sokusheshisa ubisi ngokuvamile kusetshenziselwa isifuba somntwana. Kodwa-ke, ungalindeli ukuthi isifuba sizobe sesithambile ngokushesha. Umsebenzi kaMama ukukhuthazela, ulinde futhi uhlale uphelile. Ngokuvamile ngosuku olulandelayo isimo siqala ukushintsha, ukushaywa kwesisu kubuyela esimweni esijwayelekile, futhi ukuzwa kokugcwele kwesifuba kuba lula ukubekezeleleka.
Ubuhlungu be-muscle bungaphinde buhambe nomama onesihlengikazi ezinsukwini zokuqala noma ngisho namasonto. Lokhu kwenzeka ngezizathu ezihlukahlukene. Ngenxushunxushu ebuhlungu, umama uyabamba, uhlunga ihlombe, umhlane wakhe futhi uzizwa ebuhlungu emisipha yakhe emva kwezinsuku ezimbalwa. Ngakho-ke kubaluleke kakhulu ukuba ukhululeke ukupheka ngangokunokwenzeka, ukucabanga ngakho. Uma umama esondla ehlezi, kubalulekile ukuthi angathembele kokuthile, ukuze emuva kukhululeke. Ngaphansi kwengane kungcono ukubeka umcamelo ukuze umama angadingi ukugxila izandla zakhe, ebambe. Lalela imizwa yakho ngenkathi usebenzisa futhi ukondla umntwana, bukela lapho ukhona khona, futhi ngomzamo oqinile, phumula lezi zithiyo. Zonke izinkinga ezihlotshaniswa nokuhlelwa kokuncelisa okuncelisayo zixazululwa. Into eyinhloko kumama akufanele ilahlekelwe isineke nethemba, nezihlobo zakhe - ukulalela uMama, ukumsiza nokumkhuthaza. Ngokujwayelekile 3-4 amasonto emva kokubeletha, konke kuhamba endaweni, ukwakhiwa kwe-lactation kuqiniswa, amakhono okusebenza okuhle ahlonishwa. Ukuphila kuyaqhubeka nokubikezela futhi kulungiswe.
Anatomy: isitho somuntu yinhliziyo
Ezinye Izimbangela Zokukhathala Okungapheli
Indlela yokulondoloza impilo nentsha?
Kungani u-dizzy ne-nauseous
Izinkimbinkimbi zemithi yezandla
Ukuklama nokuhlelwa kwekhishi
Ukwelashwa kokubeletha komuntu wesifazane
Amadodakazi nabesifazane abadala, ubudlelwane
Amafomu aphelele + isikhumba esibucayi
I-Horoscope ngo-December 2017 - owesifazane-ingonyama - evela kuTamara Globa no-Angela Pearl
Isifo sikashukela ezinganeni ezincane
Indlela yokuhlobisa ikhishi likaFeng Shui
Amaphutha akwenziwa ngabesifazane ebuhlotsheni bomndeni
Ngingabatshela kanjani abaphathi bami mayelana nokukhulelwa kwami?
Ama-strawberries aneshukela ebusika
Inhlangano yeqembu elihlangene le-bachelor - imibono nezeluleko
NgoMashi ngokumelene neTrump: Madonna alungele ukushaya iNdlu eNkulu
Ukunisela izitshalo zasendlini
I-Saffron sauce yokudla izitsha